Wararka Maanta: Isniin, Aug 13, 2018-Jeer Qaniinyo ku dishay dalxiise u dhashay Taiwan
Ninkan ayaa ku dhintay wax yar uun kaddib isbitaalka degmada Naivasha oo la dhigay dhaawaciisa, sidoo kale waxaa weerarkan ka badbaaday qof kale oo dalxiise ahaa Sabtidii ina dhaaftay sida uu sheegay qof ka tirsan hay’ad ka shaqeysa arrimaha duurjoogta.
‘’Waxaan hadda baadi-goob ugu jiraan sidii ay ku heli laheyn jeerta weerarkan geysatay ayuu soo dhigay boggiisa Twitter Axadii.
Jeerta ayaa inta badan laga helaan gunta hoose ee biyaha, waxaana ay ka mid tahay xayawaanaadka waaweyn ee biyaha iyo barriga ku noolaan kara oo ugu khatarta badan caalamka.
Hay’adda ayaa dalxiisan dhintay magaciisa ku sheegtay Chang Ming Chuang, oo 66 jir ah, halk qof kale ee ka badbaaday uu yahay Wu Peng Te, oo 62 jir ah, waxaana ay sheegtay in ay ka yimaadeen Shiinaha, laakiin Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Taiwan ayaa sheegtay in labadaas ay ka yimaadeen Jasiirad caalami ah.
Kenya wax xiriir ah lama laha Taiwan, waxa kaliya oo labadan ruux sheegan kareen ayaa ah in ay ka yimaadeen dalka Shiinaha.
Safaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay magaalad Nairobi ayaa sheegtay in ay u direen goobta diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda.
Sanadkii tagay oo kaliya Kenya waxaa ay ka heshay arrimah dalxiisa 1.2 bilyan oo dollar, waxaana yimid oo u soo dalxiis tagay dad gaaraya 1.4. milyan.